Barrio de Santa Cruz, na Seville | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Sevilla
Onye nke kasị mma ije ị pụrụ ime na obodo nke Sevilla bụ nke Crugbè Santa Cruz, n'ime obi obodo ochie na nke ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite. Ọ ga-abụ ije ije dị egwu, na-enye gị ohere ịse foto mara mma ma mụta ọtụtụ ihe gbasara obodo Spanish oge ochie na nke ọdịnala.
Cheta nke ahụ Obodo ochie nke Seville bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Europe na kasị ukwuu na SpainO nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita anọ ma nwee ọdịbendị, ọgịga na nnukwu ihe nketa. Ka ahụ na anyị enweghị ike ileghara ebe a, ihe ị ga-ahụ ...
1 Santa Cruz, akuku ochie n'ime obodo ochie
2 Ihe ị ga-ahụ na Santa Cruz
Santa Cruz, akuku ochie n'ime obodo ochie
Dị ka anyị kwuru n'elu, Santa Cruz bụ aha nke otu ógbè na-eme ka Obodo Ochie nke Seville. Ọ bara uru na-echeta nke ahụ n’aha ochie obodo anyị na-ezo aka n'oge akụkọ ihe mere eme tupu Industrial Revolution. Ọ bụ n'okporo ámá nke obodo ochie a ebe ị ga-ahụ Alcázar ma ọ bụ Katidral, dịka ọmụmaatụ.
E wezụga oge Arab na mgbe ochie, anyị agaghị echefu na Seville nwere roman gara aga n'okpuru aha Hispalis. Site na oge a ị ka nwere ike ịhụ ogidi atọ nke ihe owuwu ụzọ mbata nke ụlọ nsọ nke narị afọ nke abụọ, taa n'okporo ámá Marmoles. Naanị mmadụ atọ erutela narị afọ nke iri abụọ na otu, ihe ihere n'ihi na na etiti oge a ka nwere isii. N'aka nke ọzọ, tupu ịchụpụ ndị Juu ọ bụ n'okporo ámá ndị a ka Ebe ndị Juu nke Seville na, ọ bara uru icheta, n'oge Ferdinand III nke Castile ọ bụ obodo ndị Juu nke abụọ kachasị na Spen ma Toledo.
Ihe ị ga-ahụ na Santa Cruz
Okporo ámá ndị Juu dị n'akụkụ ebe ahụ ka dị, jikọtara ọnụ na akụkụ a maara dị ka agbata obi San Bartolomé. Ha agagh abu ezigbo uzo ndi nleta ma ha bu ezigbo ya ma nke a mere ha ji maa mma. E nwere parish nke otu aha na Ebe obibi nke Mercedarias na Lọ Obí nke Miguel de Mañara, ebe taa isi ụlọ ọrụ nke Culture nke Junta de Andalucía na-arụ ọrụ. Ọzọkwa, taa Hostal Casas de la Judería bụbu obí eze nke ezinụlọ Padilla.
You nwere ike ịga na Chọọchị San Nicolas na Chọọchị Santa María la Blanca nke sitere na narị afọ nke iri na asaa wee wuo ya n'ụlọ nzukọ. Obí ọzọ bụ Obí Altamira. N'aka nke ọzọ n'akụkụ mgbidi ochie Alcázar bụ ndị Ubi Murillo, nke a na-enweta site n'ije ije na okporo ụzọ mmiri. Ugbo ndị ahụ ruru okporo ụzọ mgbanaka ahụ.
Agua Street bụkwa amara na onwe ya. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya Callejón del Agua na ọ bụ ihe ọ bụla karịa ijegharị gburugburu ije nke na-aga na mgbidi na iru mgbidi Alcázares. Ọ bụ n'okporo ámá a ka ị ga-ahụ Washington irving yad, Onye edemede America nke na-anọchite anya Romanticism onye bụkwa onye nnọchi anya gọọmentị na onye mere njem nlegharị anya na ọdịbendị Hispanic-Muslim na Spain.
Ọ bụrụ na ịmalite njem site na Ogwe Triumph, akpọrọ aha a n'ihi na ala ọmajiji ahụ Lisbon nke afọ 1755 emetụtaghị katidral ahụ, ị ​​ga-ahụ Katidral nke Sevilla, Katidral nke Santa María de la Sede. Ọ bụ nnukwu ụlọ arụsị nke ndị Goth, nke o doro anya na amalitere iwu ya na mbido narị afọ nke XNUMX na ala ebe ụlọ alakụba dịbu.
Ihe ncheta ọzọ amaara ama nke Seville ka na-esikwa n'ụlọ arụsị Arab, nke akpọrọ ụlọ elu ahụ ndị Giralda 104 mita elu, na-esote ya na Ogige nke osisi oroma nke okooko osisi ya na mmiri ya juputara n’isi ha. Ọ bụ rektangulu, ogige ochie ndị otu ndị otu ndị Alakụba, wee pụta na ya, na mgbakwunye na Osisi Orange, isi iyi nke iko ya bụ nke Visigoth.
Katidral agbanweela mgbanwe dị iche iche na nke ọ bụla wetara ụdị. Mgbe ndị Kraịst gbaghachisịrị, a jiri ụlọ ahụ mee ihe otu narị afọ na ọkara na ọ bụ naanị mgbe ọ malitere ịmalite mgbanwe na ụdị Gothic, Renaissance, Baroque, Neoclassical na Neo-Gothic. Taa ọ bụ otu n'ime ụlọ ndị eleta na Europe ọ dịghịkwa onye njem nleta na Seville nke na-adịghị azọ ụkwụ na ya.
Ihu ihu ya dị ebube ma n'ime ya nwere eriri ise na ọtụtụ ụlọ ụka ndị ọkụ ha na-abanye n'ọtụtụ windo na windo windo.
Dị nso bụkwa General Archive nke Indies na Reales Alcázares. Ihe niile, yana katidral, na-etolite Ihe Nketa Uwa UNESCO kwupụtara afọ ole na ole gara aga. Ozugbo ị gara njem ahụ dum, ị nwere ike ịhapụ Plaza del Triunfo site n'akụkụ ga-ewega gị na square nke Santa Marta, otu obere square nwere osisi oroma anọ na narị afọ nke XNUMX. Lọ ọgwụ gara aga na-arụ ọrụ ebe a, ebe enwere ebe obibi ndị nọn nke ọnụ ụzọ ya bụ square n'onwe ya.
A na-akpọ akụkụ ọzọ na Santa Cruz Ogige nke ọkọlọtọ, nke dị n'akụkụ Reales Alcázares. Site na ebe a ị nwere nnukwu echiche nke Katidral na ụlọ elu ya, bụ Giralda, nke dị ihe karịrị otu narị mita elu. Na Ogige Santa Cruz, n'aka nke ọzọ, ọ bụ akụkụ nwere otu ụlọ ụka nwere otu aha, jiri ọtụtụ osisi oroma chọọ ya mma. Waslọ nsọ mbụ ahụ kwaturu na 1811, n'okpuru njigide ndị France, mana ihe kachasị mkpa bụ na ọ dị nso na mbara a, enwere ọzọ: Nnukwu Ebe.
Ruo narị afọ nke XNUMX, e nwere akụkụ nke mgbidi ebe a. Taa enwere ihe ncheta nke na-echeta Don Juan Tenorio, onye edemede nke narị afọ nke XNUMX nke José Zorrilla weghaara na narị afọ nke XNUMX. Plaza Virgen de los Reyes nwere ike ịbụ mmalite ọzọ dị mma maka ịgagharị. Corral d elos Olmos na aru oru n’ebea ma taata o n’enye kaadi ozi puru iche: uzo nwere isi iyi oriọna na gburugburu ya bu Giralda, Obí Archbishọp, Katidral na ventlọ nke ofnata Mmadụ.
Ebe ndị ọzọ na-ewu ewu bụ Plaza de la Alianza na Plaza de Doña Elvira, ya na ulo nke Doña Inés de Ulloa, ihunanya nke Don Juan Tenorio na ulo nke na-ese foto puku ụbọchị. I nwedịrị ike ịnọ ebe ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, ebe enwere Elvira Plaza Boutique Hotel, na-esote Vinela Tapas na Wine Bar. Na Venerables Square Ọ bụ ebe ọzọ enwere ike ịga ebe ọ dị ezigbo mma ma nwekwaa nnukwu ebe iri nri, yana ụlọ mara mma mara mma nke nwere patio na isi iyi.
Dị ka ị ga-ahụ, na Barrio de Santa Cruz bụ ihe gbasara ebe egwuregwu, patios na n'okporo ámá. Otu n'ime ndị ikpeazụ bụ Okporo ụzọ Mateos Gago, nke na-amalite n'azụ Katidral ahụ ma gbasaa ya na 1923, bụ taa obi tapas na obodo. A akwa ebe na-akwụsị maka a drinkụ na a aru na-eri na ije. N'ebe a, n'otu akuku, bu Santa Cruz Las Columnas Winery a ma ama. Streetzọ ọzọ a ma ama bụ Street nke Obe, nke dị na obere square na calvary nwere ogidi atọ nwere obe obe dị n'etiti.
E nwekwara ndi Okporo ámá Gloria, Susona, ochie n'okporo ámá ọnwụ na ndụ n'okporo ámá. Ọ bụrụ na ị gaa dị ka di na nwunye, ị ga-achọ ịgbaso ọdịnala isusu ọnụ na Nkuku Besma ọ bụ, obere nkuku enwere ike iru site na ịga ije n'okporo ámá Gloria. Seehụ okooko osisi, geraniums, bougainvillea na Jasmine, enwere n'okporo ámá, na-atụgharị uche na foto a ahụkarị Sevillian ụlọ na jakị na ọma ọma weghachiri eweghachi bụ nọmba 4 nke Justino de Neve n'okporo ámá. Houselọ a na-arụ ọrụ taa dịka Suite Apartments.
N’ezie, okporo ámá ọ bụla na square ọ bụla dị na Santa Cruz nwere akụ nke aka ya. Have ga-eje ije ma jee ije na ha ma ntụgharị nke akụkụ ọ bụla ga-ekpughe otu. Kedu ihe ị na-eche izute ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Sevilla » Ogige Santa Cruz, na Seville